प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध एकैदिन सर्वोच्चको महत्वपूर्ण ३ फैसला, संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा के होला ? « Janata Samachar
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध एकैदिन सर्वोच्चको महत्वपूर्ण ३ फैसला, संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा के होला ?
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले विहीवार एकैदिन ३ वटा फैसला दिएको छ ।
नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश, कर्णालीमा फ्लोर क्रस गरेर कारवाहीमा परेका ४ सांसदको पद पुर्नबहाली र एमाले महाधिवेशन कमिटिलाई अवैधानिक घोषणा गरेर सर्वोच्चले तीन वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो । अदालतले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध तीनवटा महत्वपूर्ण फैसलाहरु गरेकै दिन उहाँका निकटका सारथी पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकार पनि विश्वासको मत नपाएर ढलेको छ ।
प्रकाश ज्वालासहित चार जनालाई कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको हो ।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिलाई केन्द्रीय कमिटीको रुपमा बैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको हो ।
यस्तै सर्वोच्चले कर्णाली प्रदेशमा फ्लार क्रस गरेर सरकारलाई विश्वासको मत दिने चार एमाले सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि एमालेको माधव नेपाल पक्षधर सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाही सांसदमा पुनर्वहाली भएका छन् । सांसद नन्दबहादुर बुढा समेतले दिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले बिहीवार पद यथावत राख्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले विहीवार नै नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यन्वयन नगर्न आदेश पनि जारी गरेको छ । संवैधानिक इजलासले यस प्रकारको विषय संसदबाटै विधेयक पारित भई ऐनबाटै हुनुपर्ने भन्दै सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेश कार्यन्वयनमा रोक लगाएको हो ।
एकैदिन सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध दिएको आदेशले नेपाली राजनीतिक परिदृश्य फेरि तरंगित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको छ । यस्तै प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा अदालतमा वहस जारी छ ।